Cudurka Madow - Wikipedia
Cudurka Madow wuxuu ahaa cudur daacuun ka dilaacay qaarada yurub, wuxuu ka mid ahaa cudurada ba'an ee taariikhda bani-aadmka. cudurka waxaa u dhintay dad lagu qiyaaso 75 illaa 200 milyan oo qof oo ku noolaa dhulka la isku dhaho Eurasia intii u dhaxeesay 1347 ilaa 1351.
Bakteeriyada lagu magacaabo (Yersinia Pestis) oo keenta noocyo badan oo cudur ah, ayaa la aaminsan yahay inay sabab u ahayd.
Dhibaata cudurka waxay abuurtay taxadarro diimeed, bulsho iyo mid dhaqaaleba, taas oo saameyn weyn ku yeelatay taariikhda Yurub.
Dhimashada Madow waxaa loo maleynayaa in ay asal ahaan ka imaatay bartamaha iyo bariga Aasiya, kadib neh ee soo gaartay gobolka Crimea sanadkii 1343. halkaas kadib neh ee maraakiibta ganacsiga ku faafaya dhammaan dalalka Badda Mediterraneanka iyo Europe.
Dhimashada Madow waxaa lagu qiyaasay in ay u dhinteen 30-60% guud ahaan dadweynaha Yurub oo dhan. Wadar ahaan, cudurka wuxuu yareeyay tirada dadka adduunka qiyaastii 450 malyan ilaa 350-375 milyan oo qarnigii 14aad. Waxay shacabka yurub ku qaadatay 200 sano si ay ka soo kabtaan cudurka.
meelaha qaar sida magaalada Florence waxee Cudurka ka soo kabatay qarnigii 19aad.
cudurka ayaa soo noqnoqday ilaa horaantii qarnigii 20aad.
Cudurka Madow (1347–1351)
Hargabka Isbaanishka (1918–1920)
Cudurka neefsashada daran (2002–2003)
Hargabka Avian (2003–2005)
hergabka faafa (2009–2010)
fayraska korona ee faafa (2019–ilaa hadda)
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Cudurka_Madow&oldid=226822"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 21 Diseembar 2021, marka ee eheed 09:27.